Dawlad sharci xukumo | zmekk
Waddan kastaa wuxuu leeyahay sharciyo iyo xeerar qof walba raacayo.
Laakiin waddamada qaar sharciyada si siman dadka uma qabtaan. Dadka qaar sabab la’aan baa la xiri karaa, halka qaar aan la ciqaabayn hadday jebiyaan sharciga.
Noorwey sidan maaha. Sababtuna waa Noorwey waa waddan sharci xukumo. Tan macnaheedu waa in dadku si isku mida sharciga u raacaan, oo maxkamaduhuna dadka sharciga jebiya ciqaab ku xukumaan.
Waddamada aan sharcigu xukumin sharciyada sidan oo kale looma raaco. Tusaale ahaan maalqabeenada ama dadka awoodda leh waxay lacag siin karaan booliiska ama xaakinka si ay ciqaab uga badbaadaan.
Haddii ay gaari xoog u wadaan oo booliisku joojiyo, waxay lacag siinayaan booliiska si aan loo dacweyn. Tan waxa la dhahaa laaluush. Ama waxay garanayaan xaakinka oo sidaas darteed ciqaab yar lagu xukumayaa.
Waddamada aan sharci xukumin booliisku qofkuu rabo ayuu dembi la’aan u xiri karaa. Waxay sidani dhici kartaa haddii qofka fikradihiisa siyaasadeed ama diintiisu ka duwan yihiin kuwa awoodda dalka haysta.
Noorwey sidan maaha. Noorwey qof kastaa wuxuu maraa maxkamad caddaalada haddii sharci jebin lagu eedeeyo, booliiskuna wuxuu ka shaqeeyaa in sharcigu dadka wada qabto, hanti ama awood kasta ha yeeshaane.
Haddii raysal wasaaraha Noorwey gaari xoog u wado, waxa loo ciqaabayaa sida qof kale loo ciqaabi lahaa. Sidan weeye marka waddan sharci xukumo lagu nool yahay.
Maxay tahay sababta xasilooni uga jirin dal booliis xukumo?
Xiriir noocee ah baa qofku la leeyahay booliiska waddanka aad u dhalatay?
Dal sharci xukumo – dal sharcigu si siman dadka u qabto
Dacwad – is maandhaaf uu xaliyo xaakin maxkamadeed
Dal boliis xukumo – dal hoggaamiyaashiisa iyo booliisku xiri karaan oo ciqaabi karaan qofkay rabaan
Laaluush – lacag sharci darro lagu siiyo shaqaale dowladeed si uu kuu caawiyo